Nnukwu Scalpel si Aktaş gaa Publicgbọ njem Ọha! | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaBig Scalpel si Aktaş na Ụgbọ njem!
19 / 01 / 2018 16 Bursa, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
N'ezie, nsogbu nke obere obere ụgbọ ala na bọs nke ọha abụghị taa.
Ọ gaghị ekwe omume idozi nsogbu ekpokọtara n'abali.
Mana ị ga-ekpebisi ike idozi nnukwu nsogbu na mmegharị radical.
Bursa Mayor Alinur Aktaş amalitela ime mkpebi ndị siri ike. Onye isi oche Aktaş, nzukọ nke ụnyaahụ, 100 ọtụtụ puku mmadụ mere mkpesa na mkpebi mkpebi ụgbọ njem iji dozie ọha na eze kwupụtara na ha emeela.
Dị ka a maara, onye na-anya bọs, onye na-akpọbaghị nwa amaala nwere nkwarụ n'ụgbọala ya na ngwụsị izu gara aga, nwere nnukwu mmeghachi omume.
Agbanyeghị, ndị na-ahụ maka bọs ọha na-akpagbu ndị nwere nkwarụ na ụmụ amaala agadi bụ ndị nwere kaadị njem njem n'efu ruo ọtụtụ afọ.
Na mgbakwunye, ndị njem guzoro ọtọ, na-eguzo n'azụ ọdụ ụgbọ ala, nsogbu okporo ụzọ na ihe ọghọm na-akpata ihe ọghọm, akụkụ ọzọ nke nsogbu ahụ.
Nke a bụ mkpebi dị mkpa e mere iji kpochapụ nsogbu ndị a 2.
Nke mbu bu iwepu umu obere ugbo ala ma gbanwee ha n’ime ugbo ala ndi nke onwe.
Karịsịa, obere obere ala ndị dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ ga-atụgharị na bọs ahụ ma tinye ya na sistemụ.
Minmụ obere 1002 nọ na Bursa.
Mayor Aktaş kwuru na a ga-atụgharị obere minista 758 ka ọ bụrụ ụgbọ ala. Anyị na-eme atụmatụ ijikọ obere ebe ndị a na Burulaş site n'ịtụgharị ha ka ụgbọ ala. Ya mere, a ga-etinye ha na sistemu anyị, a ga-enyocha ya. Ọzọkwa, a ga-ebelata ọnụ ọgụgụ nke obere ala. ”
Mkpebi ọzọ dị mkpa bụ ịnyere ụgbọ ala nkịtị.
N’aka ozo, a gha enye gi nkwa nke ndi njem.
Dịka m kwuru na Girizgah, ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị nkịtị, ọkachasị ndị anyị nwere nkwarụ na ụmụ amaala agadi, ụmụ amaala nwere kaadị njem njem anaghị abanye na ụgbọala ha, iwe, mkparị na mmiri ozuzo.
Onye isi ala, Aktas, bọs ọha ndị mmadụ iji gbochie nke a ga-enye ndị njem nkwa, ka o kwuru.
Kedu mmadụ ole ndị njem ga-ekwe nkwa?
2,1 nde ndị njem njem kwa ọnwa na-ekwe nkwa kilogram 4 kwa ọnwa.
Ọ bụrụ na ọnụọgụ ndị njem dara n'okpuru nde 4, Obodo ukwu ga-eweta nkwado maka onye njem ọ bụla na-efu.
Ya mere, azụmaahịa ụgbọ ala ọha nkeonwe, "Anyị enweghị ike ịkpata ego, anyị na-ebu ndị njem n'efu" a ga-ewepụ ngọpụ.
Mayor Aktaş kwuru na ha ga-eme mkpebi a dị mkpa site na 2, ọkachasị na eriri ọdịda anyanwụ.
Ebe e si nweta ya: Mustafa Özdal - www.olay.com.t bụ
Ozi ọma si Aktaş, T2 tram line ga-ejikọta ya na Bursaray
Mayor Aktaş kwupụtara mmemme maka ibu Bursa maka ọdịnihu
Ụgbọ njem ọha na eze na Sakarya
Mmasị na njem ụgbọ njem na-abawanye na Datca
Ụbọchị Ụgbọ njem ọha na eze na Kocaeli
Aka nwanyi na njem ndi ozo na Sakarya
Ndepụta Satellite maka Ụgbọ njem na Malatya
Mmasị na njem ụgbọ njem na Mersin Na-amụba Afọ site n'afọ
Lelee Profaịlụ zuru ezu nke Alinur
A Dream-dị ka njem iji soro na Eastern Express
Mayor Caglayan Orhangazili Nabata nsogbu nke minibuses